उत्पादन परिचय: उत्पाद परिचय: फिटनेस, म विश्वास गर्दछु सबैको लागि अनौंठो होइन, स्वास्थ्यले हाम्रो शरीरलाई सुदृढ पार्न सक्छ, हाम्रो शरीरलाई अझ फिट र सेक्सी दिनुहोस्। तर लामो समय व्यायाम हाम्रो हातमा छाला छोड्न सक्छ, कुनै नराम्रो हथेली र calluses, त्यसैले फिटनेस पित्त न केवल पुराना तर नयाँ फिटनेस उत्साहीहरु को लागी एक आवश्यक उपकरण हो। फिटनेस ग्लोभ्सलाई प्रशिक्षण प्रक्रियाको क्रममा हातलाई चोटपटकबाट लगाउनबाट बचाउनको लागि डिजाइन गरिएको हो। तिनीहरूले पनि हातको पकड बढाउन सक्छन् ताकि हामी ...
उत्पादन परिचय: स्वास्थ्य, म विश्वास गर्दछु सबैको लागि अनौंठो होइन, स्वास्थ्यले हाम्रो शरीरलाई सुदृढ पार्न सक्छ, हाम्रो शरीरलाई अझ फिट र सेक्सी दिनुहोस्। तर लामो समय व्यायाम हाम्रो हातमा छाला छोड्न सक्छ, कुनै नराम्रो हथेली र calluses, त्यसैले फिटनेस पित्त न केवल पुराना तर नयाँ फिटनेस उत्साहीहरु को लागी एक आवश्यक उपकरण हो। फिटनेस ग्लोभ्सलाई प्रशिक्षण प्रक्रियाको क्रममा हातलाई चोटपटकबाट लगाउनबाट बचाउनको लागि डिजाइन गरिएको हो। उनीहरूले पनि हातको पकड बढाउन सक्दछन् ताकि हामी फिटनेस प्रशिक्षणलाई अझ राम्ररी पूरा गर्न सक्दछौं।
हामीले निर्माण गरेको फिटनेस ग्लोभ्सको यो जोडी एक प्रकारको फिटनेस ग्लोभ्स हो जुन मनलाई रिस्ट स्ट्र्याप पावरको साथ छ। यसमा मुख्यतया निम्न विशेषताहरू र कार्यहरू हुन्छन्: १. ग्लोभको कपडा जाल कपडाबाट बनेको हुन्छ र उच्च लोच र माइक्रोफाइबर छाला कपडाको साथ यसमा हावा प्वाल हुन्छ, त्यसैले यो सास फुल्ने र भरिपूर्ण छैन। २. बढेको पोशाक प्रतिरोध, किनकि फिटनेस उपकरणहरू सबै मेटल सामग्री हुन्, जब मेशिन पुरानो हुन्छ, हातहरू बाक्लो कोकुनको एक भागले ढाकिन्छ, गम्भीर रूपमा पनि छाला हुन्छ। यो फिटनेस ग्लोभहरू थ्रीडी कटि design डिजाइनको साथ, पूर्ण रूपमा एर्गोनोमिक डिजाइनको साथ लाइनमा, यो लगाएर, तपाईं हातको लागि धेरै राम्रो सुरक्षा पाउनुहुनेछ। Th. बाक्लो पाम प्याड डिजाइन, दस्ताने shockproof, निप्पल र पोशाक प्रतिरोधी। पाम भिजाउने डिजाइनको डिजाइनले मोशन कम्पन र बढेको घर्षणले गर्दा टिश्यु क्षति कम गर्न सक्छ। फिटनेस मान्छेहरू पसिना गर्न सजिलो, उपकरण होल्ड गर्दा र तपाईं धेरै फिसलन महसुस गर्नुहुनेछ। बाक्लो पाम प्याड डिजाइन फिटनेस ग्लोभज लगाएर, घर्षण बढ्नेछ, पकड शक्ति बनाउनेछ, व्यायामको स्तर सुधार गर्दछ। कडा तानो जस्तै, कहिलेकाँही, यो तपाईंको पछाडि र खुट्टाहरूमा शक्तिको अभाव हुँदैन, तर तपाईंको हातहरू बुझ्न सक्दैनन्। स्वास्थ्य समस्याहरू यस समस्याको लागि एक राम्रो समाधान हो। The. कलाई बेल्टको डिजाईनले चोटपटकबाट बच्न मद्दत गर्दछ। चोट पुर्‍याउन सब भन्दा सजिलो स्थानहरू मध्ये एक व्यायाम हुँदा कलाई हो, र हाम्रो पन्जा पावर असिस्टेड फिटनेस ग्लोभहरू हुन्। सहायक स्ट्र्यापको उपस्थितिले कलाईलाई बचाउन मद्दत गर्दछ र तपाईंको हातलाई अलि शक्तिशाली पार्दछ। फिटनेसका लागि व्यायामकर्ता, आफ्नो कलाई कसले बेर्नुको लागि सहायक बेल्ट प्रयोग गर्नुहोस् ताकि उनीहरूको लागि पछाडि र पछाडि घुम्नको लागि जति थोरै ठाउँ छ, जुन धेरै सुरक्षात्मक हुन सक्छ। यस फिटनेस ग्लोभले cm 45 सेमी सेन्टिस्ट ब्यान्डको साथ तपाईको मनलाई 360 360० डिग्री सुरक्षा प्रदान गर्दछ, ताकि तपाई चोटपटक लाग्ने डर बिना व्यायाम गर्न सक्नुहुन्छ।
हल्का वजन तर अत्यधिक सुरक्षात्मक,
नरम र छालामा बन्द तर कुनै बाधा छैन
आरामदायक र भरिपूर्ण छैन
यो सबै वर्ष भरि लगाउन सकिन्छ
बिभिन्न प्रयोगहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्।
प्रयोग गरेपछि समयमा सफा गर्दै
सुख्खा राख्नुहोस् र सूर्यको जोखिमबाट बच्नुहोस्
ब्लीच र मेसिन द्वारा सुख्खा नगर्नुहोस्
अघिल्लो: आधा औंला बहु-समारोह ग्लोभ
अर्को: माछा मार्ने पञ्जा
स्कीइ glo पञ्जा